Realme 5 wuxuu socod ku marayaa Geekbench oo leh Snapdragon 665 | Androidsis
Dhawaan Realme waxay soo bandhigi doontaa taxane cusub oo casri ah, oo ka koobnaan doona qaab dhexe iyo Kala duwanaansho Pro. ka Realme 5 Waxay noqon doontaa aaladda dhexe ee labadan, dabcan, waxayna qalabeyn doontaa astaamaha iyo qeexitaannada farsamo ee bartamaha dhexe, sidaas darteed waxay kula tartami doontaa qalabka Redmi, Xiaomi iyo Oppo qalabka sida xoogga leh Hindiya, in kasta oo waliba suuqyada kale.
Inta aan sugeyno inay timaado, Geekbench wuxuu taxay qaar ka mid ah tayada tan, waanan faahfaahinaynaa hadda.
Macluumaadka Geekbench wuxuu u diiwaangaliyay waxa u muuqda Realme 5 inuu yahay "realme RMX1911", sidoo kale waxaa si fiican loogu xaqiijin karaa shaashadda liistada asalkeeda shalay.
Liiska Geekbench ee Realme 5
Faahfaahinta cabbirka caanka ah ayaa ah qalabku wuxuu la imaan doonaa qalab Qualcomm's Snapdragon 665, waa isla processor-ka uu Xiaomi Mi a3 leeyahay oo gaaraya ugu badnaan soo noqnoqoshada shaqada ee ah 2.2 GHz sida Snapdragon 660 uu isna sameeyo. Chipset-kani wuxuu ilaaliyaa cabbirka node ee 14 nm wuxuuna soo bandhigayaa wax ku ool hufnaan tamar iyo waxqabad leh, sidaa darteed ma jiri doonaan wax dhibaato ah oo ku socda dhammaan kulamada ku yaal bartan.
Realme 5 ayaa sidoo kale lagu qiimeeyay a 4 GB RAM xasuusta iyo nidaamka hawlgalka Android Pie. Intaas waxaa sii dheer, iyadoo lagu saleynayo natiijooyinka ay ku guuleysatay inay gaarto, qeybta hal-abuurka ah waxay ku guuleysatay inay dhaliso qiyaastii 1,525 dhibcood, halka qeybta multi-core-ka ay ka heshay qiyaastii 5,498 dhibcood, oo ah astaamo lagu tilmaamo inay tahay dhammaan taleefannada casriga ah ee dhexdhexaadka ah .
Tilmaamaha kale ee terminalkani wali waa qarsoodi, laakiin waxaa la filayaa in, sida Realme 5 Pro oo kale, ay waliba la imaan doonto a nidaamka kamaradaha afar geesoodka ah, kaas oo uu hogaamin lahaa 48 MP sensor. Labada noocba waxay daaha ka rogi doonaan tan soo socota ee Ogosto 20.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Realme 5 waxay ku qaadataa safar Geekbench ah Snapdragon 665
Gigaset GX290 waa taleefan casri ah oo casri ah oo leh bahal 6,200 mah Mah
Huawei MapKit: Adeegga khariidadda astaanta